Iji nwee mmetụta na-adịgide adịgide n'uche ndị na-ege gị ntị. Otu n'ime ụzọ kachasị mma bụ ịghara ime ka ụra ya gaa na slides nke 80. Na vidio a onye edemede gosipụtara gị otu esi enweta ihe karịrị nsonaazụ dị egwu. Nyochaa ụfọdụ ihe ndị bụ isi na PowerPoint 2019. Usoro nke ga-doro anya ga-ekwe ka ị na-ahụ dị ka onye nna ukwu ọdịnaya na ụdị.
Ndụmọdụ PowerPoint 2019: Akwụkwọ ọgụgụ eji arụ ọrụ January 5th, 2021Tranquillus
GỤỌ You chere echiche banyere ịzụ ndị ọrụ gị n'oge arụghị ọrụ?
gara agaN'akụkụ steeti ahụ, ndị gọọmentị a na-ewu iwu kwadoro ịkwalite ịmaliteghachi ọrụ, ọrụ na ọzụzụ ọrụ aka na ngalaba ihe owuwu.
-esonụNdepụta omenala na Excel 2010
Ka mma kwupụta onwe gị na French (na ụlọ akwụkwọ ntọala).